भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै, कसरी थाहा पाउने कोभिड र भाइरलको फरक – Sthaniya Patra
By स्थानीय पत्र	 On Jul 27, 2021
बुटवल – वर्षा याममा अहिले धेरैलाई रुघा, खोकी, ज्वरो जस्ता लक्षणहरु देखिएका छन्। अस्पतालहरुमा पनि केही दिन यता यस्तै लक्षण भएका विरामीहरुको संख्या निकै बढेको छ। बैशाख र जेठ महिनामा कोभिड १९ को संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिएको थियो । त्यसको असर अहिले पनि समाजमा छ । रुपन्देहीमा दैनिक औषत ३० देखी ४० जनाको हाराहारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
रुघाखोकी ज्वरो आउँदा धेरैले कोभिडको आंसका पनि गर्ने गरेका छन्। तर यस्ता लक्षण देखिएका धेरैलाई कोभिड भने भइहालेको छैन। यो भाइरल ज्वरो भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका बरिष्ठ फिजिसियन डा. नन्दु पाठकले पछिल्लो एक हप्ता यता भाइरल ज्वरोका विरामी बढेका बताए । ‘हप्ता दस दिन जति भयो। सामान्य रुघा, खोकी र ज्वरोका विरामी बढेका छन्।’ उनले भने ‘यसरी ज्वरो आएर पनि कोभिड नेगेटिभ देखिएका धेरै हुनुहुन्छ ।’
रुघाखोकी र ज्वरोको समस्या कोरोना संक्रमण र भाइरल दुबैमा देखा पर्ने लक्षण हो । तर लक्षणको अवस्था भने केही फरक हुने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकाका कोरोना फोकल पर्सन समेत रहेका डा. पाठक बताउँछन् । ‘सामान्य भाइरलमा ३ दिन जति बढी नै सताउँछ । त्यसपछि घट्दै गएर ५ दिनपछि ठीक हुँदै जान्छ।’ उनले भने ‘कोभिडको ठीक उल्टो हुन्छ । सुरुको ३ दिन जति खासै केही लक्षण देखिँदैन । चौथो, पाँचौ दिनबाट ९–१० दिनसम्म असर बढी देखिँदै जान्छ।’
कोभिड भएकाहरुमा जिउ दुख्ने समस्या बढी हुन्छ। भाइरलमा त्यो समस्या कम हुने डा. पाठकले बताए । कोरोना संक्रमण हुँदा बास्ना र स्वाद पनि हराउने गर्दछ । ‘भाइरल भएर रुघा लागेकाहरुलाई पनि बास्ना हराउने समस्या हुन्छ । तर स्वाद चाँही हराउँदैन ।’ डा. पाठकले भने।
असार लागेपछि केही घटेको कोरोना संक्रमणदर पछिल्लो समय फेरि बढ्न थालेको छ । अहिले कोरोनाको परिक्षण हुन छाडेकाले लक्षण नदेखिएका तर कोरोना पोजेटिभ भएका धेरै जना समाजमा हुन सक्छन् । त्यस्ता संक्रमितलाई भाइरल भयो भने थप सताउन सक्छ ।
त्यसैले भाइरलको लक्षण देखिँदा पनि सचेत हुन र पिसिआर परिक्षण गराउन बरिष्ठ फिजिसियन डा. नन्दु पाठकको सुझाव छ । ‘सुरुमा रुघा, खोकी, ज्वरोदेखीएमा आफूलाई कोभिड भयो भनेर सोँच्नुपर्छ। अनि आफूलाई आइसोलेट गरिसक्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘त्यसको २–३ दिन पछि पिसिआर गर्न सल्लाह दिन्छु। कोरोना पोजेटिभ आयो भने छुट्टै बस्ने, नेगेटिभ आयो भने परिवारसँगै बसे भयो।’ ज्वरो आउँदा दुबै अवस्थामा झोलिलो पदार्थ र सिटामोलको प्रयोग गर्नुपर्ने डा. पाठकले बताए।…..Lumbini times
युवालाई उत्पादनमुखी कार्यमा जुट्न पुर्ब मन्त्री बरालको…
यस्तो देखियो बुटवलमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेकपाको विरोध…
कोरोना कहरका बेला एकले अर्काेलाई सहयोग गर्दै भारतका प्रबासी…